विदेशबाट फर्किएका श्रीमानले आफ्नै २ वर्षीय छोराकी आमालाई जे गरे … – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १३, २०७७ समय: ११:२६:०४
काठमाडौ / नवलपरासीमा आफ्नै श्रीमती को ज्या न लि एका युवकलाई अदालतले १६ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । उनले गत कात्तिकमा घ’टना गराएका थिए । अदालतले रामकुमार श्रेष्ठलाई जेल सजाय सुनाएको हो । सुनवल नगरपालिका ७ तरगौली, नवलपरासी निवासी ३२ वर्षीय रामकुमारले २१ वर्षीया अस्मिता श्रेष्ठको ज्या न लि एको ठहर अदालतले गरेको हो ।
रामकुमारले गत कात्तिक २७ गते दिउंसो आफ्नै कोठामा रहेकी अस्मिताको ज्या न लि एको पुष्टि भएको हो । उनले अस्मितालाई आफै दे’हत्याग गरेको दा वी गर्दै आएका थिए । सामान्य वि वादका बीच उनले अस्मिताको ज्या न लि एको वयानमा बताएका थिए । घरमा कोही पनि नभएको समयमा अस्मिता ले पा’ सो लगाएको दावी गरेका उनले प्रहरी र सरकारी वकिलसंगको वयानमा सबै वास्तविकता बताएका हुन् । घ’टना पछि उनले श्रीमतीको दिदी भिनाजुसंग अस्मितालाई अस्पताल पठाएर आफु भने घरमै बसेका थिए ।
उपचारका लागि देवदह मेडिकल कलेज लगिएको थियो । तर चिकित्कसले उनको नि’धन भएको घो’षणा गरेका थिए । उपचारका लागि परीक्षण गर्ने क्रममा उनको घां टीमा केहि दाग देखिए पछि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । अस्मिताका बुवा कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा गत मंसिर ५ गते जाहेरी दिएका थिए । गल्याङ ८, तीनदोबाटेकी अस्मिताको ३ वर्ष अगाडी रामकुमारसंग मागी बिवाह भएको थियो । उनीहरुको २ वर्षीय छोरा समेत छन् । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब गएका रामकुमार गत असौजमा घरबिदामा आएका थिए ।
यो पनि : दु’र्घटनामा एकको मृ’त्यु, चार घा’इते
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा भएका दुई छुट्टाछुट्टै सवारी दु’र्घटनामा एकको मृ’त्युु भएको छ । दु’र्घटनामा परी चार घा’इते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाउन्नेमा आज दिउँसो बस आफैँ अनियन्त्रित भएर सडक छेउमा पल्टिँदा बसका चालकको मृ’त्यु भएको छ ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ घ्यूखोलामा ना६ख ५०३५ को बस आफँै अनियन्त्रित भएर पल्टिँदा बसका चालक दाङ घोराही उपमहानगरपालिका–१४ बस्ने ४० वर्षीय मोतीराम बुढाको मृ’त्यु भएको हो । बस सडक छेउमा ख स्दा चालक अचानक ख स्दा मृ’त्यु भएको हो । चालक सडकदेखि २०० मिटर तल खस्दा मृ’त्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीले बताउनुभयो । बसमा सवार यात्रु भने सबै सकुशल रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै बौदिकाली गाउँपालिका–६, कोटरथमा लु१ज ३३२९ नम्बरको जिप प ल्टिँदा तीन घा’इते भएका छन् । घा’इते हुनेमा बौदिकाली गाउँपालिका–४ बस्ने ३१ वर्षीय मोहनसिंह थापा, २२ वर्षीय यमबहादुर गाहा, ३७ वर्षीय पीताम्बर गाहा, २५ वर्षीय कुलबहादुर गाहा घा’इते भएका छन् । घा’इतेको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीले बताउनुभयो ।
१. महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? जानी राखौँ